Efa navoaka ny divay 7.8 ary nambara ny mety ho fifindra-monina any Gitlab | ubunlog
Efa navoaka ny divay 7.8 ary nambara ny mety ho fifindra-monina any Gitlab
Darkcrizt | 06/05/2022 15:03 | Nohavaozina amin'ny 12/05/2022 22:05 | Software
Vao haingana no nambara Famotsorana ny kinova fampandrosoana vaovao an'ny Wine 7.8, izay hatramin'ny nivoahan'ny version 7.7 dia nikatona ny tatitra momba ny bug 37 ary 470 ny fanovana natao.
Ho an'ireo izay tsy mahalala momba ny Divay dia tokony ho fantany izany rindrambaiko loharano malalaka sy misokatra ity malaza ity de mamela ny mpampiasa handefa rindranasa Windows amin'ny Linux ary ireo rafitra miasa hafa toa an'i Unix. Mba ho teknika kely kokoa, ny divay dia sosona mifanentana izay mandika ny antso an-tariby avy amin'ny Windows mankany Linux ary mampiasa tranomboky Windows sasany, amin'ny endrika fisie .dll.
Ny divay dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hampiharana fampiharana Windows amin'ny Linux. Ho fanampin'izany, ny vondrom-piarahamonin'ny divay dia manana tahiry fandefasana antsipirihany feno.
1 Vaovao lehibe momba ny divay 7.8
1.1 Ahoana ny fametrahana ny kinova fampiroboroboana ny divay 7.8 amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
1.2 Ahoana ny fanesorana ny divay avy amin'ny Ubuntu na ny derivative sasany?
Vaovao lehibe momba ny divay 7.8
Ao amin'ity kinova vaovao ity, X11 sy OSS mpamily (Open Sound System) dia niova fo hampiasa ny endrika rakitra azo tanterahana PE (Portable Executable) fa tsy ELF.
Ho fanampin'izany, ireo mpamily fanamafisam-peo dia manome fanohanana ho an'ny WoW64 (Windows 64-bit amin'ny Windows), sosona iray hampandehanana programa 32-bit amin'ny Windows 64-bit.
Ny fandrafetana isa dia omena amin'ny alàlan'ny angon-drakitra eo an-toerana vaovao natsangana ao amin'ny tahiry Unicode Common Locale Data Repository (CLDR).
Tatitra momba ny bibikely mihidy mifandraika amin'ny fampandehanana ny lalao: Assassin's Creed IV Black Flag, The Evil Within, Guilty Gear XX.
Raha ny ampahany amin'ny tatitra momba ny bibikely mihidy mifandraika amin'ny fampiharana, Adobe Lightroom 2.3, Powershell Core 7, FreeHand 9, dnSpy, dotnet-sdk-5.0.100-win-x64, Metatogger 7.2, GuiPy miavaka.
Tsara ihany koa ny manamarika fa andro maromaro lasa izay Alexandre Juilliard, mpamorona sy mpitarika ny tetikasa Divay, dia nanambara ny fandefasana mpizara fampivoarana fiaraha-miasa andrana, gitlab.winehq.org, mifototra amin'ny sehatra GitLab.
Amin'izao fotoana izao ny mpizara mampiantrano ny tetikasa rehetra ao amin'ny hazo divay lehibe, ary koa kojakoja sy zavatra hafa avy amin'ny tranokala WineHQ. Nampiharina ny fahafahana mandefa fangatahana fampitambatra amin'ny alalan'ny serivisy vaovao.
Ho fanampin'izay, atomboka ny vavahady iray izay mamindra fanehoan-kevitra Gitlab ary mandefa fangatahana misintona mankany amin'ny lisitry ny mailaka fampivoarana divay, midika izany fa mbola hita taratra ao amin'ny lisitry ny mailaka daholo ny hetsika fampivoarana divay. Mba hahafantaranao ny fivoarana sy ny fanandramana mifototra amin'ny Gitlab, dia nisy tetikasa demo divay mitokana, izay ahafahanao mitsapa ny fandefasana fangatahana misintona na mampiasa script controller nefa tsy misy fiantraikany amin'ny code tena izy ary tsy mandoto ny lisitry ny mailaka fampandrosoana.
Misaraka, marihina fa mampiasa GitLab ho an'ny fampandrosoana divay mbola andrana io ary mbola tsy vita ny fanapahan-kevitra farany momba ny fifindrana any GitLab. Raha manapa-kevitra ny mpamorona fa tsy mety amin'izy ireo ny GitLab, dia hiezaka hampiasa sehatra hafa izy ireo. Ho fanampin'izay, navoaka ny famaritana momba ny workflow natolotra rehefa mampiasa GitLab ho sehatra fampandrosoana lehibe ho an'ny divay.
Finalmente raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'ity kinova fampandrosoana vaovao ity ianao Navoaka ny divay, azonao atao ny manamarina ny firaketana ny fanovana amin'ity rohy manaraka ity.
Ahoana ny fametrahana ny kinova fampiroboroboana ny divay 7.8 amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Raha toa ianao ka liana amin'ny fanandramana ity kinova fampandrosoana vaovao an'ny divay amin'ny distro anao ity dia azonao atao izany amin'ny fanarahana ireo torolalana zarainay etsy ambany.
Ny dingana voalohany sy lehibe indrindra dia ny fampandehanana ny maritrano 32-bit, fa na dia 64-bit aza ny rafitray, ny fanatanterahana ity dingana ity dia mamonjy antsika olana maro izay matetika mitranga, satria ny ankamaroan'ny tranomboky divay dia mifantoka amin'ny maritrano 32-bit.
Noho izany dia manoratra momba ny terminal izahay:
ankehitriny tsy maintsy manafatra ny lakile isika ary manampy azy ireo amin'ny rafitra miaraka amin'ity baiko ity:
Vita izao izahay dia hanampy ity repository manaraka ity amin'ny rafitra, noho izany dia manoratra amin'ny terminal izahay:
Farany dia afaka manamarina isika fa efa manana divay napetraka ary koa ny kinova ananantsika amin'ny rafitra amin'ny fampiharana ity baiko manaraka ity:
Ahoana ny fanesorana ny divay avy amin'ny Ubuntu na ny derivative sasany?
Raha ireo izay te-esory ny divay amin'ny rafitr'izy ireo na inona na inona antony, Ireto manaraka ireto ihany no tokony hataon'izy ireo.
Esory ny kinova fampandrosoana:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Efa navoaka ny divay 7.8 ary nambara ny mety ho fifindra-monina any Gitlab
deb-get, "apt-get" hametrahana rindrambaiko antoko fahatelo amin'ny Ubuntu
ClamAV 0.105.0 dia tonga miaraka amin'ny fanatsarana, ny fetra mitombo ary ny maro hafa